Minneapolis iyo Xafladii Jaaliyaadka W.America Ay Ku Taageerayeen Wax-Qabadka XDSHSI - Cakaara News
Minneapolis iyo Xafladii Jaaliyaadka W.America Ay Ku Taageerayeen Wax-Qabadka XDSHSI
Minneapolis ( cakaaranews )Axad 10kii Aprill 2016, Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay kasoo qaybgaleen qurbajoogta u dhalatay DDSI islamarkaana lagu taageerayay guulihii is dabajooga ahaa ee uu Xisbigu 8 dii Sano ee u danbeysey kasoohooyiyay Horumarka, Nabadgalyada iyo Maamulka suuban ayaa lagu qabtey Magaalada Minneapolis ee Cariga Mareykanka.
Xafladan oo aan ahayn midi ugu horaysay ee ay sameeyaan qurba joogta DDSI ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kaladuwan ee kudhaqan gobolada kaladuwan ee wadanka maraykanka iyagoo taageerahoodana ku miijinayay boodhadh ay ku qoranyihiin hal-kudhagyo kuwaasoo ay kamid ahaayeen waan garab taaganahay waxqabadka XDSHSI islamarkaana sita Astaanta Xisbiga iyo waliba calanka dalka iyo ka deegaanka. Sidookale goobtaas xaflada lagu sameeyay ayaa waxaa laga soojeediyay khudbado ka hadlaya sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray XDSHSI.
Hadaba xafldan taageeraha ah ayaa waxaa shabakada cakaaranews uga waramay Gudoomiyaha Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya ee Jaaliyaadka Waqooyiga Ameerica mudane Ibraahim carab khuuriye oo sheegay inay ujeedada xafladani tahay in si buuxda looga warbixiyo waxqabadkii iyo guulihii uu soohiyay XDSHSI iyo waliba in ay muujiyaan taageeraha ay u hayaan xisbiga.
Dhinaca kale waxuu sheegay gudoomiyuhu in si qodo dheer looga hadlay horumarka balaadhan ee uu soo hooyiyay XDSHSI iyo waliba heerar kii kala duwanaa ee uu u soo maray Taabogalinta Isbedel-horumarineed oo Damaanad u Noqda Shacabka iyo maamul-suuban oo hanta Qaab-dhismeedyada Dawlada kana go'an tahay ka midho-dhalinta Qorshayaasha Kobaca Dhaqaale taasoo maanta Guud ahaanba laamaha Dawladu kusaleysanyihiin.
Sidookale waxuu tilmaamay masuulku in xaflada lagusoobandhigay muuqaalo muujinaya waxqabadkii Xukuumada DDSI ee uu majaraha u hayo XDSHSI madaxwaynahana uu u yahay mudane Abdi Mohamud Omar islamarkaana uu Deegaanka Gaarsiiyey Meel aan soo noqosho laheyn Oo isbadal baaxad weyn kusameyey Degaankii,iyo shacabkii kunoolaa oo aynu wada xasuusano sidii uu shaley ahaa iyo maanta Halka lamarayo.
Wuxuuna intaa kudaray in talaabbo kasta oo deegaanka kadhacda ay si wanaagsan uga warhayaan haday tahay Nabagalyada iyo Kaabayaasha Horumarinta Magaalooyinka iyo xoolo-dhaqatada oo meel aad u wanaagsan lagaadhsiiyay oo ah isbedel la taaban karo oo muuqda.
Sikastaba ha ahaatee wuxuu sheegay in jaaliyadu ay si wayn u soo dhaweeyeen Go'aankii geesinimada lahaa ee kalafadhigii ugu danbeeyay ee Golaha Baarlamaanku ku ansixiyeen 25 kii degmo, 2 dii maamul magaallo, iyo 2da gobol ee ay kusoo kordhiyeen Deegaanka somalida itoobiya midaasina ay keeni doonto horumar balaadhan oo si xawli ah ku dhaqaaqa.
Dhinaca kale waxay tilmeemeen anay salaan iyo mahadcelin kal iyo laab ah u diyaraan dhamaan xubnaha XDSHSI iyo sadexda laamaood ee dawalada Deegaanka Soomaalida ee kala ah laanta fulinta, laanta dajinta iyo waliba laanta garsoorka. Waxaa kale oo ay salaan kal iyo laab ah u soodireen dhamaan shacabwaynaha DDSI meelkasta oo uu ku suganyahay.
Ugudanbayna jaaliyada ayaa sheegtay in ay si buuxda u taageer-san yihiin una-garab-taagan yihiin waxqabadka muuqda ee XDSHSI. Waxayna xuseen in ay kaalintooda ka qaadanayaan dhisida iyo hirgalinta schoolada iyo dhismayaasha xarumaha caafimaadka ee degmooyinka cusub oo ah kuwo ay kubaxeyso lacag dhan 7 milyan oo bir oo u dhiganta 280,000 00 dollar degmo walba. Midaasina ay noqotey mid ay soo dhawaynayaan jaaliyadaha kunool wadamada reer Galbeedka oo ay jaaliyad walba guda-gashey abaabulka iyo sidii ay degmada ay kasoo jeedaan u soo gaarsiin lahaayeen qeybtooda kaga aadan.